Indawo Enamagumbi aliqela w/Ukubonwa Kwechibi Elihle (Igumbi 1) - I-Airbnb
Indawo Enamagumbi aliqela w/Ukubonwa Kwechibi Elihle (Igumbi 1)
Xa iyi-183 Mbps, iqela lakho lonke lingafowuna ngevidiyo lize libukele iividiyo kwi-intanethi.
Indawo yethu ihleli kwiSouth Harrison Lake eColumbus, IN kwaye iyindawo entle ejonge ichibi, ngokukhethekileyo xa ubuka ilanga.
Ukuba olunye undwendwe lubhukishe igumbi 2, uza kwabelana ngeendawo ezisetyenziswa ngumntu wonke (igumbi lokuhlala, ikhitshi elincinci, igumbi lokuhlambela) kunye naloo ndwendwe. Igumbi lakho lokulala lelabucala elinomnyango otshixwayo.
Indawo yethu imalunga nemizuzu eyi-10 xa uhamba ngemoto usiya kwidolophu yaseColumbus, okanye malunga nemizuzu eyi-20 xa uhamba ngemoto usiya kwidolophu yaseNashville. Sikwinkqubo yokuyilungisa ngokutsha, ibe sigqibile ukuhlaziywa malunga nesiqingatha sendlu (ubukhulu becala inqanaba eliphezulu, apho sihlala khona). Sisoloko sisebenza phandle endlwini, ibe sisenokungxola kancinci xa sisenza loo nto, kodwa ngokuqhelekileyo asingxoli kakhulu!
Uza kuba negumbi lokulala labucala; ezinye iindawo (ikhitshi elincinci, igumbi lokuhlala, igumbi lokuhlambela) zisenokusetyenziswa ziindwendwe ezihlala kwelinye igumbi lokulala, ukuba awubhukishi lonke inqanaba elisezantsi.
Ukuba ungathanda ISIQINISEKISO SOKUBA akuzukufuneka wabelane ngendawo kunye nabanye abantu abanokuba zindwendwe, kuza kufuneka ubhukishe lonke inqanaba elisezantsi (endaweni yegumbi lokulala nje eliyi-1). Nantsi ilinki yokwenza oko:
https://airbnb.com/h/harrison-lake-1-and-2 * * Phawula: Ukuba elinye lamagumbi okulala sele libhukishiwe ngezi ntsuku uzifunayo, awuzukwazi ukubhukisha le ndlu isetyenziswa nangabanye abantu.
I-wifi ekhawulezayo – i-183 Mbps
Indawo yaseHarrison Lake iphumle kakhulu kwaye ikhululekile. Ngeempelaveki ezifudumeleyo uya kufumana abantu abaninzi emanzini ngokukhwela isikhephe, kwityhubhu, okanye ukutyibiliza ekhephini.
Sihlala kumgangatho ongasentla wekhaya, kwaye uza kudibana nathi ngoxa ukwindlu kuba sisoloko singaphandle. Siyakuvuyela ukucebisa okanye ukunceda kangangoko sinako!